Kintana Magazine N.1 - Aprily 2019
Izahay ato amin'ny fikambanana Ikala STEM dia faly manolotra anao ny
Kintana Magazine N. 1 - Aprily 2019
Fa inona moa ny « Kintana Magazine » ?
Kintana Magazine dia tetik’asa novolavolain’ny mpikambana ao amin’ny Ikala STEM. Natao indrindra mba ahafahan’ny rehetra manovo fahalalàna amin’ny fomba tsotra, ary koa hampisongadina ireo lalam-piofanana azon’ny tanora arahina. Fanamby imasoan’ny Kintana Magazine ihany koa ny fampahafantarana ireo mpikaroka Malagasy, ny asa ataony sy ny tontolon’ny fikarohana ary ny zavatra iainan’ny mpikaroka amin’ny ankapobeny.
Inona avy no ho hita ao amin’ny laharana voalohany?
Filatsahana vato “météorite” teto Madagasikara
Dossier STEM Arovy ny varika fa fototry ny fahavelomana! Ny Géologie sy ny fiovaovan’ny toetr’andro Ny aretina Pesta sy ny tontolony: ny parasy, ny voalavo ary ny olombelona Getting ready for the Square Kilometre Array! L’initiative Barefoot College : Faire des femmes illettrées des « Ingénieurs solaires »
Invité Dr Lady Mireille Razafindranaivo, hiresaka ny « Laboratoire de Géomagnétisme et d’Électromagnétisme (LGE) »
Ny anjara toeran’ny vehivavy malagasy eo amin’ny sehatry ny siansa sy ny fikarohana Ny vehivavy sy ny Matematika
Maniry ny aheno ny hevitrao izahay!
Inona no lahatsoratra tena nahaliana anao? Misy fanamarihana, sosokevitra, adihevitra, na lohahevitra tianao hohadihadiana amin’ny laharana manaraka? Amin’ny laharana manaraka dia omena sehatra manokana ianareo mpamaky! Maniry ny handray anjara amin'ny laharana Kintana Magazine manaraka? Mifandraisa amin’ny mpikarakara ny Kintana Magazine amin’ny alalan’ny mailaka: Ikalabekintana@gmail.com
Asaina manokana ianao mpamaky hifandray mivantana amin’ny mpanoratra ny lahatsoratra izay mahaliana anao ! Ho hitanao isaky ny lahatsoratra ny mikasika ny mpanoratra ary ny adiresy mailaka ahafahana mifandray aminy.
Alaivo ato ary ny Kintana Magazine.